ဆီယက်တဲလ် hempfest 2019 - ဆေးခြောက်တရားဝင်သတင်းအစီရင်ခံစာများ
ဆီယက်တဲလ် Hempfest 2019 - ပြန်လည်သုံးသပ်
Tom & Miggy - ဆီယက်တဲလ် Hempfest
ဆီယက်တဲလ် Hempfest ရဲ့ 28 နှစ် သြဂုတ်လ 16, 17 ရက်နှင့် 18 ၏ 2019 Puget အသံအပေါ် Myrtle Park မှာကျင်းပခဲ့သည် ဆေးခြောက်တရားဝင်သတင်း အမျိုးမျိုးသောအရာတို့ကိုအပေါ်အစီရင်ခံရန်ရှိခဲ့သည်!
"ဆီယက်တဲလ် Hempfest"ဆေးခြောက်ဆေးဝါးကုသမှုမတိုင်မီ ၁၉၉၁ ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့သောဆေးခြောက်တရားဝင်ဆန္ဒပြမှုကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် ၂၈ နှစ်တာကာလအတွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုပြသရန်၊ ဆေးခြောက်ယဉ်ကျေးမှုကိုဂုဏ်ပြုရန်၊ Tom & Miggy မှာပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့သည် ဆီယက်တဲလ် Hempfest 2019 နှင့်အခြားသူများကြွယ်ဝစွာဆေးခြောက်နှင့်ဖန်ရောင်းနေကြသည်ကြနေစဉ်ဆေးခြောက်အကျဉ်းသားများအတွက်ပိုက်ဆံရှာကူညီပေးခဲ့သည်။
Seattle Hempfest 2019 - အကျဉ်းသားစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ
Seattle Hempfest ၏ ၂၈ နှစ်ကိုသြဂုတ်လ ၁၆၊ ၁၇ ရက်နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၁၈ တွင် Puget Sound ရှိ Myrtle Park တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ဆေးခြောက်တရားဝင်သတင်း အမျိုးမျိုးသောအရာတို့ကိုအပေါ်အစီရင်ခံရန်ရှိခဲ့သည်!
“ Eddie Lepp” သည်ကျော်ကြားသောဆေးခြောက်အကျဉ်းသားဖြစ်သည်။ သူသည်လူများကိုနှောက်ယှက်ခြင်းမပြုသည်မှာကိုးနှစ်နီးပါးရှိခဲ့သည်။ အစိုးရကဒီလိုလုပ်တယ်၊ လူတွေကတခြားသူတွေကိုစွန့်လွှတ်ပြီးအပေးအယူလုပ်ဖို့လူတွေကိုအားကိုးတယ်။ Eddie Lepp သည်သားကောင်များအတွက်ငွေရှာဖွေသည် Stephanie Landa ရဲ့ Freedom Grow အဲ့ဒါကဆေးခြောက်အကျဉ်းသားရဲ့ commissary ရန်ပုံငွေကိုသူတို့ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကငါတို့လိုချင်တာကိုနေ့စဉ် ၀ ယ်ယူနိုင်တယ်။ ရုံအခြားအကြီးအနေ့က ဆီယက်တဲလ် Hempfest 2019!!
မုန်တိုင်း Trooper Hempfest 2019
Seattle Hempfest 2019 - လူအုပ်နှင့်မိုးမျှော်တိုက်
ဒွန် Skakie - Homegrow ဝါရှင်တန်
ဆီယက်တဲလ် Hempfest - နောက်ခံဇာတ်လမ်း
ကယ်ရီ Cannon - ဆီယက်တဲလ် Hempfest
Ultimate Frisbee ဆီယက်တဲလ် Hempfest 2019
ဆီယက်တဲလ် Hempfest 2019 - လူအစုအဝေး
ဆီယက်တဲလ် Hempfast Hemposium
ဆီယက်တဲလ်အဆိုတော်ဟင်နရီ - Hempfest 2019
ဂျက်ဖ် Eichen အင်တာဗျူးများ Hempfest 2019
Tom & Miggy - ဆေးခြောက်တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်သတင်း
Seattle Hempfest ၏ ၂၈ နှစ်ကိုသြဂုတ်လ ၁၆ ရက်၊ ၁၇ ရက်နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၁၈ တွင် Puget Sound ရှိ Myrtle Park ၌ကျင်းပခဲ့ပြီး Cannabis Legal News တွင်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာများကိုအစီရင်ခံရန်ဖြစ်သည်။
Elvy Musikka - ဆီယက်တဲလ် Hempfest 2019
Vivian McPeak - ဆီယက်တဲလ် Hempfest 2019
Seattle Hempfest 2019 တွင်အကျဉ်းထောင်၌ထိုင်နေသောဆေးခြောက်အကျဉ်းသားများကိုထောက်ပံ့ပေးသောတဲတစ်လုံးပါရှိသည်။ သူတို့တွင်အခြားသူများသည်ဆေးခြောက်ရောင်းရန်လိုင်စင်ရှိသောကြောင့်ကြွယ်ဝချမ်းသာလာသည်။
ဆေးခြောက်သည်ကြီးကြောင်းနားလည်ရန်လူများကိုကူညီရန်၊ Seattle Hempfest 2019 ရှိတဲများစွာကိုလမ်းလျှောက်ခြင်းအားဖြင့်ပျော်စရာ၊ ဂိမ်းများနှင့်အမြတ်အစွန်းအားလုံးသည်မရရှိနိုင်ပါ။
ဤတွင် Seattle Hempfest 2019 အကြောင်းအကြမ်းဖျင်းဖော်ပြထားသည်
28 Seattle Hempfest
100,000 ကျော် visitors ည့်သည်များမှစိုက်ပျိုးခဲ့သည်
Expedia Hempfest အငြင်းပွားမှု
Expedia သည် Seattle ရှိအိမ်ခြံမြေအမြောက်အများကို၎င်း၏နည်းပညာကုမ္ပဏီအတွက်ဝယ်ယူခဲ့သည်
ဆီယက်တဲလ် Hempfest 2019 - လှုပ်ရှားမှု
Jack Herer သည် Hempfests တွင်မကြာခဏစကားပြောခဲ့သည်
Seattle Hempfest သည် Social Equity ကိုအဓိကထားသည်
Eddie Lepp ကလှူဒါန်းမှုများကိုကူညီခဲ့သည်
လာမည့်နှစ်တွင် Seattle Hempfest 2020 ၌ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ
အားသွင်းသောစခန်းနှင့် Youtube စတူဒီယိုအားသွင်းခြင်း ဆေးခြောက်တရားဝင်သတင်း
ဆေးခြောက်နှင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာဆေးခြောက်နှင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ - ပို၍ အာရုံစိုက်ရန်လိုသည့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောခေါင်းစဉ်နှစ်ခု။ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာလက္ခဏာများကိုကုသရန်ဆေးခြောက်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ခြင်းနှစ်ခုလုံးသည်လေ့လာမှုများရှိသော်လည်းစားသုံးသူအများစုသည်ဆေးခြောက်သည်အကောင်းဆုံးနှင့်အလုံခြုံဆုံးကုသမှုဖြစ်သည်။ Tiffany ...
by Lauryn | ဇူလိုင် 14, 2020 | 2020 ဖက်ဒရယ်ဆေးခြောက်တရားဝင်ဆေးခြောက်မူဝါဒစီမံကိန်း, ဆေးခြောက်တရားဝင်မှု 2020 XNUMX ဆေးခြောက်ဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး Keith Stroup NORML, ဆေးခြောက်တရားဝင်သတင်း, မဲပေါ်တွင်ဆေးခြောက်, Pennsylvania ပြည်နယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆေးခြောက်ဥပဒေ, Pennsylvania ပြည်နယ်ဆေးခြောက်ရှေ့နေပက်ထရစ်နိုက်တင်ဂေးလ်, ပြည်နယ်ဥပဒေများ
Pennsylvania အရွယ်ရောက်ပြီးသူသုံးသောဆေးခြောက်ဥပဒေများ Pennsylvania တွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသုံးသောဆေးခြောက်ဥပဒေများသည် Pennsylvania ၏ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများစိတ်ထဲတွင်ရှိသည်။ SB 350 ဖြတ်သွားလျှင် Pennsylvania သည်အပန်းဖြေခြင်း (အရွယ်ရောက်ပြီးသူသုံးသောဆေးခြောက်) သူတို့၏ပြည်နယ်သို့လာသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ Pennsylvania ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Leach က ...
by Lauryn | ဇူလိုင် 9, 2020 | ဆေးခြောက်လှုပ်ရှားသူများ, ဆေးခြောက်တရားဝင်သတင်း, 710 အမျိုးသား Dab နေ့ကဘာလဲ
710 ဆိုတာဘာလဲ။ 710 ဆိုတာဘာလဲ။ BHO ဘယ်ကလာတာလဲ dabs လူမြိုးတစျမြိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာလဲ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးသမိုင်း၌ကြီးမြတ်သောအချိန်ကာလများမှ Pot သမိုင်းပညာရှင်ဒေးဗစ်ဘင်နော့စ်က ၇၁၀ ကိုဆင်နွှဲရန်နှင့်ဤအားလပ်ရက်ကြီး၏မူလအစနှင့် ပတ်သက်၍ သမိုင်းဝင်သင်ခန်းစာပေးသည်။ အဲဒါကိုနားထောင်ပါ
ဥက္ကလာဟိုးမားတွင်ဆေးရုံဖွင့်လှစ်နည်းအိုကလာဟိုးမားတွင်ဆေးခန်းတစ်ခုဖွင့်ရန်ကန ဦး ကုန်ကျစရိတ်များသည်အခြားတရားဝင်ပြည်နယ်များထက်သိသိသာသာနိမ့်သည်။ ဥက္ကလာဟိုးမားတွင်ဆေးခန်းတစ်ခုဖွင့်ရန်အတွက်မှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုရရှိရန်နှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများကိုစဉ်းစားရန်လိုသည်။
တရားဝင်ကြီးထွားမှု Op ကိုဘယ်လိုစတင်ရမလဲ
by Lauryn | ဇူလိုင် 6, 2020 | ဆေးခြောက်တရားဝင်သတင်း, ဆေးခန်းများအတွက်ဆေးခြောက် Proformas နှင့် Vigland Advisors ကြီးထွားလာသည်, တရားဝင်ကြီးထွားမှု Op ကိုဘယ်လိုစတင်ရမလဲ
တရား ၀ င်ကြီးထွားမှုအားမည်သို့စတင်မည်နည်းတရားဝင်ကြီးထွားမှုမည်သို့စတင်မည်နည်းတရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမည်သို့စတင်မည်နည်းသည်သင်၏ပြည်နယ်သို့တရားဝင်ရောက်ရှိမှုရှိမရှိသင်ကိုယ်တိုင်သင်ပထမဆုံးမေးလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆေးခြောက်စက်ရုံကိုအိမ်၌စိုက်ပျိုးဖူးပါကသင်ကပန်းခြံထဲတွင်လမ်းလျှောက်နေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသင်သိပြီးဖြစ်သည်။ အဲဒီအပင်တစ်ပင်ကိုယူပြီးဆိုပါစို့။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှဆေးခြောက်ဗြိတိန်တွင်ဆေးခြောက်သည်တရားဝင်ပါသလား။ ယူကေမှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်အစီအစဉ်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီအစီအစဉ်အောက်မှာလူဘယ်လောက်များများလူနာတွေလဲဆိုတာသိရလို့သင်အံ့အားသင့်သွားမှာပါ။ Elliott Rolfe နှင့် Nick Earles တို့မှ Mackrell.Solicitors မှ ...
CBD နှင့် ပတ်သက်၍ မိဘများသိထားရန်လိုအပ်သည်
by Lauryn | ဇွန် 24, 2020 | CBD သတင်းများ, အစိမ်းရောင်အိန်ဂျယ် CBD, လျှော် CBD, CBD နှင့် ပတ်သက်၍ မိဘများသိထားရန်လိုအပ်သည်
CBD နှင့် ပတ်သက်၍ မိဘများသိထားရန်လိုအပ်သောအချက်များ CBD နှင့် ပတ်သက်၍ မိဘများသိထားသင့်သည့်အချက်များ။ CBD သည်လမ်းကြောင်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ၊ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆေးခြောက်အသစ်များကိုအလင်းအားဖြင့်လူများမြင်နိုင်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ CKSoul မှ Kim Barker CBD သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြောင်းလဲပုံကိုဆွေးနွေးရန်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
အီလီနွိုက်ပြည်နယ်အတွက် R3 အစီအစဉ် & ထောက်ပံ့ငွေ
by Lauryn | ဇွန် 17, 2020 | 2020 ဖက်ဒရယ်ဆေးခြောက်တရားဝင်ဆေးခြောက်မူဝါဒစီမံကိန်း, ဆေးခြောက်တရားဝင်သတင်း, အီလီနွိုက်ပြည်နယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆေးခြောက်, အီလီနွိုက်ပြည်နယ်တရားဝင်အပန်းဖြေဆေးခြောက်ကိုယ်စားလှယ်။ Jehan Gordon-Booth ဘီလ် 2020, အီလီနွိုက်ပြည်နယ်အတွက် R3 ထောက်ပံ့ငွေ, လူမှုရေးတန်းတူညီမျှမှု
အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ရှိ R3 အစီအစဉ်နှင့်ထောက်ပံ့ကြေး R3 အစီအစဉ်သည်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်မှထောက်ပံ့ကြေးများကိုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောစစ်ပွဲ၏မှားယွင်းမှုအချို့ကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းအဖြစ်ဖန်တီးထားသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မေလ ၁၉ ရက်နေ့အီလီနွိုက်ပြည်နယ်မှ R19 အတွက်အခွန်ငွေဒေါ်လာ ၃၁.၅ သန်းခွဲဝေပေးခဲ့သည်ဟုမကြာသေးမီကကြေငြာခဲ့သည်။
by ဒါဝိဒ်သည် | ဇွန် 16, 2020 | ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, ဆေးခြောက်ဘဏ်လုပ်ငန်း, ဆေးခြောက်စီးပွားရေးအစီအစဉ်, ဆေးခြောက်တရားဝင်သတင်း Canna Advisors အကြံပေးစက်မှုလုပ်ငန်း, ဆေးခြောက်လိုင်စင်အနိုင်ရ
ရင့်ကျက်နေသောတရားဝင်ဆေးခြောက်စျေးကွက်သည်ရှုပ်ထွေးသောဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြစ်သည်။ ထိုဥပဒေများသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင် Pennsylvania နှင့် Florida ကဲ့သို့သောအချို့ပြည်နယ်များသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လိုင်စင်အစီအစဉ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အခက်တွေ့နေသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အချို့ ... ကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး
by Lauryn | ဇွန် 4, 2020 | ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, ဆေးခြောက်ဆေးခန်းလုံခြုံရေးစနစ်အစီအစဉ်, ဆေးခြောက်ဆေးခန်းလုံခြုံရေးစနစ်အစီအစဉ်ထီးနည်းပညာများ, ဆေးခြောက်ဖြန့်ဖြူး NABIS, ဆေးခြောက်တရားဝင်သတင်း, ဆေးခြောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ NorCal Vans
ဆေးခြောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များဆေးခြောက်၊ ဆေးခြောက်နှင့်အခြားအဖိုးတန်ပစ္စည်းများသိုလှောင်ရုံများ၊ လက်လီအရောင်းဆိုင်များနှင့်ပုဂ္ဂလိကသိုလှောင်ရုံများသို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်အတွက်ဆေးခြောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များလိုအပ်သည်။ ဆေးခြောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး NorCal Vans သည် discuss ည့်သည်အိမ်ရှင် Dustin Robinson နှင့်အကောင်းဆုံးဆွေးနွေးရန် ...
Pennsylvania ဆေးခြောက်ရှေ့နေ Pennsylvania ကဆေးခြောက်ရှေ့နေပက်ထရစ်ကေနိုက်တင်ဂေးသည် Pennsylvania တွင်ဆေးခြောက်တိုးတက်မှုအကြောင်းဆွေးနွေးသည်။ စစ်တမ်းတစ်ခုအရပဲင်စီလ်ဘေးနီးယားရှိမဲဆန္ဒရှင် ၆၂ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေရန်မဲပေးကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ပြည်နယ်အတွင်းတိုးတက်မှုတစ်ခု ...
by ဒါဝိဒ်သည် | မေလ 28, 2020 | ဆေးခြောက်စီးပွားရေးအစီအစဉ်, ဆေးခြောက်ဖြန့်ဖြူး NABIS, ဆေးခြောက်တရားဝင်သတင်း, အီလီနွိုက်ပြည်နယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆေးခြောက်, Uncategorized
by Lauryn | မေလ 27, 2020 | 2020 ဖက်ဒရယ်ဆေးခြောက်တရားဝင်ဆေးခြောက်မူဝါဒစီမံကိန်း, အရီဇိုးနားဆေးခြောက်ရှေ့နေသောမတ်စ်ဒင်း, ဆေးခြောက်လှုပ်ရှားသူများ, ဆေးခြောက်တရားဝင်မှု 2020 XNUMX ဆေးခြောက်ဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး Keith Stroup NORML, ဆေးခြောက်တရားဝင်သတင်း, မဲပေါ်တွင်ဆေးခြောက်, သတင်းများ Update ကို, ပြည်နယ်ဥပဒေများ
အရီဇိုးနားဆေးခြောက်ရှေ့နေအရီဇိုးနားဆေးခြောက်ရှေ့နေ၊ သောမတ်စ်ဒင်းသည် ၂၀၂၀ တွင်အရီဇိုးနား၏ဆေးခြောက်စီးဆင်းမှုဆိုင်ရာရှေ့ဆောင်လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရန်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ...
by Lauryn | မေလ 27, 2020 | ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, ဆေးခြောက်စီးပွားရေးအစီအစဉ်, ဆေးခန်းများအတွက်ဆေးခြောက် Proformas နှင့် Vigland Advisors ကြီးထွားလာသည်, လျှော် CBD, ပြည်နယ်ဆေးခြောက်လိုင်စင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာလျှောက်လွှာ Canna Advisors အကြံပေးအဖွဲ့, ဆေးခြောက်လိုင်စင်အနိုင်ရ
ဆေးခြောက်စီးပွားရေးစီမံကိန်းဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်စတင်လုပ်ကိုင်လိုသောမည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်မဆိုဆေးခြောက်စီးပွားရေးအစီအစဉ်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ စီးပွားရေးစီမံချက်သည်သင်၏ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သင်၏လျှောက်လွှာကိုအမှန်တကယ်ဖောက်သည်သို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ စီးပွားရေးစီမံချက်တစ်ခုကိုရေးသားခြင်းသည် ...
ဆေးခန်းနှင့်ကြီးထွားမှုအတွက်ဆေးခြောက် Proformas များ
by Lauryn | မေလ 20, 2020 | ဆေးခြောက်ဘဏ်လုပ်ငန်း, ဆေးခန်းများအတွက်ဆေးခြောက် Proformas နှင့် Vigland Advisors ကြီးထွားလာသည်, လျှော်ကုမ္ပဏီများ, ဆေးခြောက်လိုင်စင်အနိုင်ရ
ဆေးခြောက်နှင့်ကြီးထွားမှုအတွက်ဆေးခြောက် Proformas ဆေးခန်းနှင့်ကြီးထွားမှုအတွက်ဆေးခြောက် Proformas သည်သင်၏ဆေးခြောက်စီးပွားရေးအစီအစဉ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် proforma တင်းပလိတ်များအများအပြားရှိသည်။ သို့သော်ဆေးခြောက်ပရိုမာမဆိုသည်ကားအဘယ်နည်း။
by Lauryn | မေလ 18, 2020 | 2020 ဖက်ဒရယ်ဆေးခြောက်တရားဝင်ဆေးခြောက်မူဝါဒစီမံကိန်း, ဆေးခြောက်လှုပ်ရှားသူများ, ဆေးခြောက်တရားဝင်သတင်း, မဲပေါ်တွင်ဆေးခြောက်, နိုင်ငံတကာဆေးခြောက်, နိုင်ငံတကာဆေးခြောက်သတင်း, Cannabis သည်တောင်အာဖရိကတွင်တရားဝင်ဖြစ်သည်, တရားဝင်သတင်း
ဆေးခြောက်သည်တောင်အာဖရိကတွင်တရားဝင်ရှိသလား။ ဆေးခြောက်သည်တောင်အာဖရိကတွင်တရားဝင်ပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ ရှုပ်ထွေးတယ် တစ်ကြိမ်တွင်တောင်အာဖရိကသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်စတုတ္ထမြောက်အကြီးဆုံးဆေးခြောက်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သော်လည်းသင်သည်ကိုယ်ပိုင်နေအိမ်ပြင်ပရှိတောင်အာဖရိကတွင်ဆေးခြောက်ကိုစားသုံးပါက ...
တစ် ဦး ဆေးခြောက် Co-Op ကို run ဖို့ကိုဘယ်လို
by Lauryn | မေလ 13, 2020 | လျှော် CBD, လျှော်ကုမ္ပဏီများ, Cannabis Co-op Chicago Cannabis ကုမ္ပဏီကိုမည်သို့လည်ပတ်မည်နည်း, လူမှုရေးတန်းတူညီမျှမှု
တစ် ဦး ဆေးခြောက် Co-op ကို run ဖို့ကိုဘယ်လို "ဆေးခြောက် Co-op ကို run ဖို့ဘယ်လို?" သင်၏ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပိုမိုမျှတသောပုံစံကိုသင်စိတ်ဝင်စားပါကမိမိကိုယ်ကိုမေးရန်မေးခွန်းကောင်းဖြစ်သည်။ ဆေးခြောက်သမဝါယမနှင့်စုပေါင်းလူကြိုက်များလာခြင်းနှင့် - ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်! သူတို့ဟာ ...
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးခြောက်စီးပွားရေးရှေ့နေများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များလည်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည်သင်၏စီးပွားရေးကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ (သို့) ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးသောစည်းမျဉ်းများမှကာကွယ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖုန်းခေါ်ပါ (309) 740-4033 || tom@collateralbase.com အီးမေးလ်ပို့ပါ